Waxay ku taal:Qubrus
Warbaahinta xayeysiinta ah ayaa laga beddelay wargeysyada raadiyaha dhaqameed iyo buugaagta illaa shabakadda telefishanka ee hadda jirta iyo soo-bandhigga xirfad-yaqaannada gudaha / banaanka. Eachinled wuxuu sii wadaa inuu barto hal-abuurnimada, wuxuu boos ka sameystay warshadaha soo-bandhigga. Waxaan sii wadeynaa balaarinta suuqyada dibada, iyo sameynta xiriir saaxiibtinimo oo waqti dheer ah macaamiisha dalal badan oo kala duwan oo adduunka ah.
Mashruuceena ugu dambeeyay waxaa loogu talagalay macaamiisha duugga ah ee Qubrus, mashruucani waa 20.736mx2.304m P3 Curved LED bandhigay, qeexitaanka sida soo socota: Nationstar SMD2121 laambadaha madow, 5124IC, Tilmaamaha korontada ee 'Mewellwell', LVP7000 video processor oo awood badan.
Markii ay rakibeen, waxay ogaadeen in dhibaatooyinka qaarkood la soo saaray, ay ku adag tahay xallintooda, waxaan isla markiiba go'aansanay inaan u dirno injineerkeenna si uu u caawiyo, Dadaallada wadajirka ah, wax walba waa ku habboon yihiin in la dhammaystiro. Shirkadda, waxay ku qanacsan yihiin adeeggayaga iyo tayada wax soo saarka, Waxaan sii wadnay inaan wada shaqeyno dhowr sano. Rajo waxaan iskaashi la yeelan karnaa mashruuc dheeri ah mustaqbalka dhow waxaanan leenahay horumar ganacsi oo dheeri ah oo ku saabsan Qubrus iyo aagga badda dhexe.
Eachinled wuxuu had iyo jeer ku sii jeedaa waddada adduunka si uu u keeno xalka ugu habboon, halkee ku sugan tahay? lamaanahayaga qaaliga ah!